Rikoorradii laga diiwaan geliyey kulankii ay kooxda Arsenal xalay guuldarrada kala kulantay Sheffield United ee Premier League – Gool FM
(Sheffield) 22 Okt 2019. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa guuldarro xanuun badan kala soo laabtay naadiga Sheffield United oo ay booqatay kulan ka tirsan horyaalka Premier League.
Gunners oo guul ay gaarto kulankan saldhigan lahayd kaalinta saddexaad ee kala sarreynta horyaalka Premier League ayaa looga soo adkaaday 1-0 ciyaartii ka dhacay garoonka Bramall Lane.
Gool uu dhaliyey Lys Mousset 30’daqiiqo qeybtii hore ee ciyaarta ayaa Naadiga Sheffield United kaga filnaaday guul ay ka gaartay Arsenal.
Haddaba halkaan hoose ka eeg rikoorradii laga diiwaan geliyey kulankii ay xalay kooxda Arsenal guuldarrada kala soo laabatay Sheffield United oo ay booqatay:-
>- Tan iyo markii uu bilowday xilli ciyaareedkii la soo dhaafay, Arsenal ayaa kaararka ugu badan ku qaadatay inay xiddigaheedu istuureen oo ay jilliin sameeyeen, waxaana loo taagay 7 kaar waana in ka badan koox kasta oo kale horyaalka Premier League.
>- Kooxda Arsenal ayaa laga dhaliyey 22 gool oo horyaalka Premier League kuwaasoo ah kubadaha karoosyada ah ee la soo qaado, waxaana kaliya ka badan kooxaha Watford 25 gool looga dhaliyey iyo Everton oo 24 gool looga dhaliyey.
>- Arsenal ayaa kaliya labo kulan shabaqeeda gool ka ilaashatay 14-kii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League.
>- Lys Mousset ayaa dhaliyey labo gool lixdii kulan ee uu saftay xilli ciyaareedkan horyaalka Premier League waana in hal ka badan intii loo diiwaan geliyey 24 kulan oo uu kal ciyaareedkii hore ee 2018-19 u saftay kooxda Bournemouth.
Imise ciyaaryahan ayay ku leedahay kooxdaada liiska 30-ka xiddig ee u sharraxan abaal-marinta Ballon d'Or 2019?
Neymar & Suarez oo hoggaaminaya xiddigaha magacyada waa weyn ee seegay abaal-marinta Ballon d'Or 2019… (Eeg Shax laga sameeyey!)